Sales ihe - Wenzhou Safewire Electric Co., Ltd
Nkwa nke ire ere
News & blọọgụ
Nka na ụzụ ọmụma isi
Sale isi nke Safewire productsPlug na Play:
The wet ọnụ ma ọ bụ achọ ọnụ ngọngọ na-optimally mere ndokwa maka onwe gị na-amalite na nwụnye ozugbo. Ọ bụghị nanị na ndị ngwa, ma na nso cover-efere na IP55 nchedo larịị nwekwara ike na-arụ ọrụ na electric ozugbo ike na data ọsọ ọsọ. Immediate ohere ndị dị oké mkpa ka ndị ọrụ n'ihi na ihe owuwu na kọmputa ngwaọrụ kwesịrị ka a ejikọrọ na ebubo na oge.
Nso cable ọwa agabiga na ala nke na-arụ ọrụ ebe. Data na ọkụ eletrik nwere ike iche. The ọwa Njirimara esiri-nchebe na ndị ọzọ ụlọ ọrụ dị ka ọkọlọtọ. USB na sitere n'ala nwere ike na-nweta kpatara trunking usoro.
Integrates multi-sockets na data ma ọ bụ ọdịyo configurations n'ime otu zuru ngwaọrụ, zoro n'okpuru ngwá ụlọ ma ọ bụ kabinet na naanị 80mm diameter oghere otú ịzọpụta ndị ọzọ ohere.
Na -ejikọ smart:
Gụnyere mbara 45 * 45mm anya, sọrọ port USB chaja nke 5VDC 3.0 dị ka ndị ozi voltaji USB smart ngwa ụgwọ, support QC3.0, eburu Qualcomm indentification mgbawa. Power akakabarede ọnụego nwere ike iru 80%. Ọ bụghị nanị na waya njikọ, ma na-akwado wireless Nchaji ọrụ nhọrọ kwekọrọ na Qi ọkọlọtọ.
The n'ala anya-anọgide n'ime mgba ọkụ ma ọ bụ jikọọ na ngwaọrụ ndị na-nnọọ mfe. Ha na-emi odude n'okpuru mbughari coverplate ma ọ bụ skirting na ndị dị na a igwe anaghị ma ọ bụ ọla. Ọzọkwa, anyị mmapụta usoro ga-ebili nwayọọ nwayọọ na ọbụna ọsọ nke bụ mgbanwe. Àgwà anyị mmapụta usoro bụ na ogologo ndụ oge, a pụrụ ịdabere na arụmọrụ, obere mkpọtụ na-arụ ọrụ mma wdg a damping ngwaọrụ echiche na e patented site Safewire.
Safety-nche na-nzuzu na-àmà imewe
Ọtụtụ n'ime anyị na electric anya bụ na a dịgasị iche iche nke nwere ọgụgụ isi nchedo ọrụ gụnyere overcharge nchedo, n'elu-temp nchedo, n'elu-voltaji nchedo, obere sekit nchedo, n'okpuru-voltaji nchedo, bufee nchedo wdg
Ọzọkwa, anyị akwụkwọ imewe panel na-eme ẹbiet na n'ala dị ka 180 ogo mgbe ọ bụ na-emeghe. Ọ pụrụ izere ada azụ n'oge echichi. The-echebe n'ọdụ ụgbọ mmiri nke cable ọpụpụ pụrụ iduga waya USB nke n'ala anya na n'ụzọ dị irè na-echebe ndị waya USB akpụkpọ megide emebiri. The USB Wepụ echiche na e patented site Safewire.
Copyright - 2010-2018: All Rights echekwabara. Nkwado teknụzụ: globalso
Tinye: Ala nke abụọ, Ogige Akụ, Obodo Liushi, obodo Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China